Anyị na-agba ajụjụ ọnụ Juanjo Guevara, onye mmepụta nke ngwa UCast | Esi m mac
Anyị na-agba ajụjụ ọnụ Juanjo Guevara, onye mmepụta nke ngwa UCast
Ndị hụrụ Podcast nọ n'ọdịmma n'ihi na ngwa ọhụrụ nke na-ekwe nkwa ịgbanwe ahụmịhe anyị na ụdị ọdịnaya a ga-apụta na Storelọ Ahịa Ngwa ngwa. Aha ya bụ UCast na taa anyị gbara ajụjụ ọnụ Juanjo Guevara Muñoz, onye nrụpụta ya.
UCast bụ ngwa ọzọ raara nye na-ege ntị Pọdkastị nke ga-ada na Apple App Store na Spanish ekpomeekpo. Onye nrụpụta ya bụ Juanjo Guevara Muñoz, nke amụrụ na Madrid mana ibi na Murcia "ọtụtụ afọ ugbu a" ebe ọ mepụtara ngwa maka ụlọ ọrụ ebe ọ rụrụ ọrụ afọ ise, ihe ọ na-agwakọta na UI / UX imewe.
JOSE ALFOCEA: N'ime Storelọ Ahịa ahụ enwerelarị ngwa maka ige ntị pọdkastị. Na-enweghị na-aga n'ihu anyị nwere Apple Pọdkastị, Oke, iVoox, Spreaker, gịnị kpatara Podcast ọhụrụ ọ dị mkpa?
JUANJO GUEVARA: Mgbe m malitere oru ngo nke UCast Emere m ya n'ihi ebumnuche abụọ, nke mbụ ka m gaa n'ihu na-emepe ma na-emeziwanye akụkụ m dị ka onye nrụpụta ngwa na onye mmebe, yana n'ihi na dị ka onye na-azụ ahịa Podcast enweghị m ahụ iru ala na ngwa ọ bụla dị ugbu a, n'ime ha niile achọtara m ihe Ọ masịrị m. Ha na-ekwenye, ma ọ bụ na ha nwere oke mgbagwoju anya, ma ọ bụ dị mfe ma ọ bụ na ha enweghị atụmatụ m ga-achọ, ọ bụ ya mere m ji malite ịrụ ọrụ iji mepụta ngwa nke nwere ike imeziwanye akụkụ ndị a niile.
JA: Gịnị ka aha a họọrọ na-aza: UCast?
JG: Ọfọn, ọ bụ ihe na-enye ezigbo ego ma m ji nwa m nwoke dị ọnwa iri na asatọ. Otu ụbọchị m gbalịrị ime ka ọ kwuo Podcast na ihe m nwetara bụ "UuuuCasss" ma ya mere aha ahụ, ma eleghị anya ọ bụghị nke kachasị mma mana enwere m mmasị ịnwe obere nwa ahụ nwa m.
JA: Kedu ihe anyị ga-ahụ UCast na anyị enweghị na ngwa Podcast ndị ọzọ?
JG: Nke mbu jiri nlezianya mee ihe na iji ya eme ihe, nke ahu bu otu n'ime ihe ndi ozo nke oru a, agbaliri m na onye obula nke batara udiri udiri a oge mbu nwere ike ige nti Podcast, ya mere echiche nke elu ọkọlọtọ na Podcast ndepụta; N'aka nke ọzọ, ngwa nwere ike imeju ma ndị nkịtị nọ na pọdkastị a na ndị ọrụ tozuru etozu na n'ikpeazụ, ọ bụ ngwa ga-eto eto dabere na echiche na echiche nke ndị ọrụ m chọrọ inye nnukwu ọkwa dị ka ọ bụ ha onye n’oge beta a nyegoro otutu ihe ngwa a si di taa.
JA: Na Applelizados anyị na-anwale UCast. Anyị maara na ọ ka nọ na mmepe mmepe mana anyị ka na-atụ uche ụfọdụ atụmatụ ndị nwere ike ịmasịcha mma. Isi ga-abụ na onye ọrụ nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ nke ọkacha mmasị ha pọdkastị. You ga-etinye atụmatụ a?
JG: N'ezie, anyị nọ na nke a ugbu a ma anyị kwenyere na ngwa ahụ kwesịrị ịnwe nhọrọ a, ọ bụ ihe anyị kwesịrị inwe ike ịga n'ahịa
JA: Kedu ozi ndị ọzọ dị na ụzọ mgbe UCast weputara na App Store?
JG: Ewezuga ihe m kwurula banyere listi ọkpụkpọ, anyị na-arụ ọrụ na ngalaba mmekọrịta mmekọrịta karịa ka anyị nwee ike ịnye ndị ọrụ ọdịnaya edozi na ọkwa pụrụ iche. N’oge na-adịbeghị anya anyị etinyegoro ụfọdụ ndozi dị ka isi n’isiokwu a n’ihi ekele nke ụfọdụ ndị ọrụ na ihe mere ị ga-eji kwuo ya, pọdkastị.
JA: Anyị ga-enwe ụdị kachasị maka iPad?
JG: A ga-enwe, ihe m na-enweghị ike ikwenye bụ ma ọ bụrụ na ọ ga-adị njikere maka ntọhapụ nke V 1.0 ma ọ bụ ga-emechaa. Na ụzọ map nke UCast Anyị emeela atụmatụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka App maka Apple Watch, Apple TV na gịnị kpatara ị ga - eji kwuo ya, gam akporo na nkwado maka Chromecast.
JA: Ma ugbu a, anyị na ihe niile anyị na-eche, olee mgbe ọ ga-abụ UCast dịịrị ndị ọrụ niile na Storelọ Ahịa ngw na kedu ka ọnụ ahịa ya ga-adị?
JG: Anyị nwere olile anya na ọ gaghị ewe anyị ogologo oge ịnọ na Storelọ Ahịa ahụ, echiche a bụ ịhapụ ihe dịka otu ọnwa ma ọ bụrụ na anyị jikwaa ime ihe kwekọrọ na Roadmap nke anyị zubere mana ọ ka nwere ọrụ ịme ma ọ bụghị naanị na ọkwa mmemme . Ọnụ nke ngwa ahụ ga-abụ € 1.99 n'oge izu mbụ nke mmalite, mgbe nke a gasịrị, ọnụahịa ahụ ga-abụ 2.99 XNUMX
Can nwere ike ịgbaso mgbanwe nke UCast ma mara akụkọ niile site na profaịlụ gị na Twitter ebe Juanjo na-aga ma na-aza obi abụọ na aro niile nke ndị ọrụ.
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ beta testers nke UCast, gaa na nke ya ibe weebụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Anyị na-agba ajụjụ ọnụ Juanjo Guevara, onye mmepụta nke ngwa UCast
Ngwa kacha mma iji egwu Podcast, ma site na imewe na site na nhọrọ. Nnukwu ọrụ
Bambooti, ​​akpụkpọ osisi nke abụọ maka MacBook gị
Anya Apple Watch nke Switzerland karịrị nkeji iri abụọ na ise nke 2015